Global Voices teny Malagasy » Mety hiatrika telo taona an-tranomaizina ilay Rosiana bilaogera LiveJournal · Global Voices teny Malagasy » Print
Mety hiatrika telo taona an-tranomaizina ilay Rosiana bilaogera LiveJournal
Voadika ny 08 Janoary 2019 4:33 GMT 1	 · Mpanoratra Sami Ben Gharbia Nandika Harentsoa Tsiky Rakotoson
Sokajy: Rosia, Mediam-bahoaka
Mety higadra telo taona an-tranomaizina (Azafady vakio ny tantara manontolo ato amin'ny Global Voices ) ilay bilaogera Rosiana 23 taona, Dmitry Shirinkin, izay nanoratra tantara foronina tao amin'ny bilaoginy  aingam-panahy tamin'ny fakàna sary tao Virginia Tech . Nitantana ny bilaogy LiveJournal i Dmitry Shirinkin tamin'ny lohateny hoe tetraox ary nanoratra momba ny fividianana basy sy famonoana olona maromaro tao amin'ny iray amin'ireo anjerimanontolo ao an-tanàna. Voampanga ho “nanaitra fisian'ny fandrahonana fampihorohoroana amim-pahadisoana ” izy.
“Nandinika ny bilaogin'i Dmitry ny biraon'ny mpampanoa lalàna ary nahita fa naniry hitifitra olona am-polony izy”, hoy ny tatitry ny Russia Today . Na izany aza, nangataka mpandalina fiteny ny mpisolovavan'i Shirinkin mba hanome ny heviny amin'ny maha-manampahaizana azy amin'ity lahatsoratra mampiady hevitra ity. Nahemotra amin'ny 20 septambra ny fitsarana.
Tamin'ny resadresaka nifanaovana tamin'ny Russia Today (jereo ny horonantsary etsy ambony), nilaza i Shirinkin hoe: “Tsy nihevitra velively aho fa mety hiteraka fihetsika tahaka izany avy amin'ny sampan-draharahan'ny fiarovana ny fanoratana lahatsoratra fohy. Nanadihady ahy izy ireo, nanontany ny misy ny basiko, kanefa tsy manana basy aho na iray aza. “
Araka ny voalazan'ny Russia Today, nahatonga an'i Dmitry ho malaza ny bilaogy talohan'ny fitsarana satria nahazo ny anarana bilaogera tsara tsara indrindra ao amin'ny faritra izy. Amin'ny lafiny iray, sahiran-tsaina ireo bilaogera Rosiana satria mety hiteraka ohatra ratsy ho an'ireo mpisera aterineto ao amin'ny firenena ny raharaha Shirinkin.
Bilaogera Livejournal Rosiana iray hafa koa no miatrika sazy roa taona an-tranomaizina na onitra 100.000-robla (4000 dolara) noho ny “fandrisihana fankahalàna” polisy. Araka ny voalazan'ny mpampanoa lalàna ara-paritra, Komi , ilay hafatr'i Sawa Terentyev, 21 taona izay voalaza fa manafintohina – ary efa nesorina tao amin'ny tranokala – dia ahitana “antso mivantana mikendry handrisika fankahalana na fanoherana, ary koa manimba ny fahamendrehan'ny … vondrona ara-tsosialy manokana: ny polisy. “
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/01/08/132857/
 tantara manontolo ato amin'ny Global Voices: https://www.globalvoicesonline.org/2007/08/22/russia-blogger-on-trial-for-writing-fiction/
 fakàna sary tao Virginia Tech: http://en.wikipedia.org/wiki/Virginia_Tech_Shooting
 nanaitra fisian'ny fandrahonana fampihorohoroana amim-pahadisoana: http://www.russiatoday.ru/news/news/14131
 Bilaogera Livejournal Rosiana iray hafa : http://thedifferencemagazine.blogspot.com/2007/04/do-you-dare-leave-comment.html
 Araka ny voalazan'ny mpampanoa lalàna ara-paritra, Komi: http://www.metimes.com/storyview.php?StoryID=20070813-091350-6031r